Arakan Muslim: သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နှိင်သည့် ဆေးဝါးများ
အခု ပြောချင်တဲ့ ဆေးတွေကတော့ မြန်မာ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ဆိုရင် စိတ်ကို ပြောင်းလဲ စေသော ဆေးဝါးများ စာရင်းမှာ ထည့်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
အခုပြောမယ့် ဆေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှု တွေကို အထောက်အကူ ပြုဖို့ အသုံးပြု ကြပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်တယ် ဆိုရာတွင် ကာယကံရှင်၏ သဘောဆန္ဒ မပါသော လိင်မှုဆိုင်ရာ အပြုအမူတိုင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ဤနေရာတွင် မလျှော်ရာ ကိုင်တွယ်ခြင်းမှ အစ (အရွယ် ရောက်သူတိုင်း သိကြပြီး ဖြစ်မည့် အမြင်ရိုင်းသော ရှင်းလင်းချက် စာသားများကို ဖျက်ထား ပါသည်) ကြံစည်ခြင်းတို့ပါ ပါဝင်ပါသည်...........ယခုပြောမည့် ဆေးဝါးများ၏ အာနိ သင်ကြောင့် ဆေးခတ် ခံရသူဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံနိုင်မှု မရှိတော့ဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှု အား ငြင်းပယ် နိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးကာ မည်သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကိုပင် မှတ်မိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။
ယင်းဆေးဝါး များသည် ယေဘုယျ အားဖြင့် အရောင်မရှိ၊ အနံ့မရှိဘဲ အရသာလည်း မရှိသဖြင့် တစ်ဖက်သား မရိပ်မိစေဘဲ အချိုရည် အတွင်းသို့ ထည့်ခတ် နိုင်ပေသည်။ Date rape drug အမျိုးအစား အနည်းဆုံး သုံးမျိုး ရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -
Date rape (ချိန်းတွေ့ ကျင့်ကြံခြင်းလို့ ဘာသာပြန်ရင် ရမယ်ထင်ပါ့)ဟု အသုံး များသော်လည်း ပညာရှင် အများစုကတော့ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း (drug-facilitated sexual assault) ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ပိုမို နှစ်သက်ကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများအား ဓါးပြမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းအရ တိုက် ခိုက်ခြင်းများ ကဲ့သို့သော အခြား ရာဇ၀တ်မှု များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျားမ မရွေး ဆေး အာနိသင် ပြနိုင်ပေသည်။
GHB သည် အရောင်အဆင်းနှင့် အနံ့မရှိသော အရည်၊ အဖြူရောင် အမှုန့်နှင့် ဆေးပြားဟူ၍ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ Rohypnolသည် ဆေးပြား ပုံစံဖြစ်ပြီး အရည်များတွင် ပျော်ဝင် နိုင်သည်။ ဆေးပုံစံ အသစ်သည် အရည်များတွင် ပျော်ဝင်သည့် အခါ အပြာရောင် သန်းသွား သော်လည်း အရောင် မရှိသည့် ဆေး ပုံစံ ဟောင်းအားလည်း ရရှိနိုင် ပေသေးသည်။Ketamine မှာမူ အဖြူရောင် အမှုန့်ဖြစ်သည်။
ဆေးသည် လျှင်မြန်စွာ အာနိသင် ပြနိုင်သည်။ ဆေးအာနိသင် မပျယ်ခင်ခံသည့် အချိန်မှာမူ ကွဲပြားသည်။ ယင်းသည် ဆေးမည်မျှ အသုံးပြုသည် ဆိုသည့် အချက်နှင့် အရက် ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်း များနှင့် ရောစပ်ထားသည့် အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အရက်သည် ထိုဆေးများ၏ အာနိသင်ကို ပိုမို ဆိုးဝါးစေပြီး ကျန်းမာရေးကို ပိုမို ထိခိုက် စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်GHB ကို အိမ်တွင်ပင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ် နိုင်ပေသည်။
အာရုံ စူးစိုက်နိုင်မှု လျှော့ကျခြင်း အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်ခြင်း မူးဝေခြင်း မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင် စိတ်ဖြစ်ခြင်း အမြင်ေ၀၀ါးလာခြင်း သတိလစ်ခြင်း လေဖြတ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်း ဆေးခတ်ခံ ရချိန်နှင့် ဆေး အာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက်များအား မမှတ်မိခြင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း တုန်တုန် ယင်ယင်ဖြစ်ခြင်း ချွေးထွက်ခြင်း အော့အန်ခြင်း နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးကွေးခြင်း အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း သတိမေ့မြောခြင်း (ဦးနှောက်အလုပ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း - coma) သေဆုံးခြင်း
ဆေးခတ် ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက် များအား မမှတ်မိခြင်း သွေးပေါင်ချိန် ကျခြင်း အိပ်ချင်လာခြင်း ကြွက်သားများ အားလျှော့ လာခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သားများအား ထိန်းချုပ်နိုင် စွမ်း မရှိတော့ခြင်း အရက်မူး သကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်း မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ် ဖြစ်ခြင်း စကား မပြောနိုင်တော့ခြင်း လှုပ်ရှားရန် ခက်ခဲလာခြင်း အသိစိတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ခြင်း အမြင်ေ၀၀ါး လာခြင်း မူးဝေခြင်း အစာအိမ် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်အာရုံ ချောက်ခြားခြင်း အချိန်နှင့် အမှတ်အသား များအား မှတ်သားနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း အမြင်နှင့် အကြား အာရုံများ မမှန်မကန် ဖြစ်လာခြင်း မိမိကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ဟု ခံစားလာရခြင်း လှုပ်ရှား နိုင် စွမ်းအား ထိခိုက်လာခြင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲလာခြင်း အူတက်အောင်ရယ်ခြင်း အော့အန်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ် ထိတွေ့ ခံစားနိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း မှတ်ဉာဏ် ထိခိုက်ခြင်း အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း ထုံထိုင်းခြင်း လှုပ် ရှား မှုအား ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း အမူအရာ ကြမ်းတမ်းလာခြင်း များဖြစ်ပါသည်။
စကားသံ ဗလုံးဗထွေးဖြစ်ခြင်း ဒီဆေးတွေ တရားဝင်သလား?
ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ချို့ ဆေးတွေက တရားဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို မထိခိုက်ဟု မဆိုလိုပါ။ တရား ၀င် ဆေးဝါး ဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူများ (ဆရာဝန် ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ် များ)၏ ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ အသုံး မပြုသင့်ပါ။
Rohypnol သည် တရားဝင် ဆေးဝါး မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဥရောပနှင့် မက္ကစီကိုတို့တွင် အိပ်မပျော် သည့် ရောဂါများ အတွက် သောက်ရန် ညွှန်လေ့ရှိပြီး ခွဲစိတ်ရာတွင် မေ့ဆေး အဖြစ်လည်း တရားဝင် အသုံးပြု တတ်ကြသည်။
Ketamine ကို အမေရိကတွင် လူများနှင့် တိရိစ္ဆာန်များ အတွက် မေ့ဆေး တစ်မျိုး အဖြစ် တရားဝင် သုံးစွဲကြ သည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် အများဆုံး အသုံးပြု ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန် ဆေးခန်းများရှိ Ketamine ဆေးများအား မကြာခဏ လုယက် ခံကြရကြောင်း သိရသည်။
GHBအား narcolepsy ဟုခေါ်သည့် အိပ်မပျော်သည့် ရောဂါအား ကုသရန်အတွက် အမေရိကတွင် မကြာသေး မီက တရားဝင် ဆေးဝါး အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဆေးခတ် မခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
ကိုယ်နှင့် မသိသူများမှ တိုက်ကျွေးသည့် ဖျော်ရည်၊ သောက်ရေစသည့် အရည်များအား မသောက်ပါနှင့်။ အအေး သံဗူးများအား ကိုယ်တိုင်ဖွင့်၍ သောက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင် သောက်ရည်နှင့် အအေးဗူး များအား ကိုယ်နှင့်မကွာ ထား၍ အိမ်သာသွားလျှင်ပင် ယူသွားပါ။ အအေးနှင့် ရေအား အခြားသူနှင့် မျှဝေ မသောက်ပါနှင့်။ Punchဖျော်ရည်များနှင့် ယင်းကဲ့သို့သော လူအများ စုပေါင်းသောက်သုံး သည့်ခွက်များ၊ ပုလင်းများအတွင်းမှ အရည်များအား မသောက်ပါနှင့်။
(မိန်းကလေးတွေ သင်္ကြန်လို အချိန်မျိုး သတိထား ကြဗျို့။ အဲဒီဟာတွေ ထဲမှာ ဆေးခတ် ထားနိုင် ပါတယ်။) ထူးခြားသော အနံ့နှင့် အရသာရှိသော မည်သည့်အရည် ကိုမျှ မသောက်ပါနှင့်။ များသောအားဖြင့် GHB တွင် ငန်သော အရသာ ရှိပါသည်။ အကယ်၍ ဆေးခတ် ခံရသည် သို့မဟုတ် မုဒိမ်း ကျင့်ခံရသည်ဟု ထင်ပါက ရဲစခန်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ ဖြစ်နိုင်သမျှ ချက်ခြင်း ဆီးစစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။ ဆေးအာနိသင်သည် အလွန် လျှင်မြန်စွာ ပျယ်သွား နိုင်ပါသည်။
Rohypnolသည် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းတွင် နာရီပေါင်း များစွာ နေနိုင်ပြီး ဆေးသောက်သုံးပြီး ၇၂ နာရီ အတွင်းတွင် ဆီးအတွင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ GHB မှာမူ ၁၂ နာရီ အထိသာ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း နေနိုင်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ အကူအညီမရမချင်း ဆီးမသွားပစ် ပါနှင့်။ ရေလောင်းဆေးခြင်း၊ရေချိုးခြင်း သို့မဟုတ် အ၀တ်အစားလဲခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ယင်းအရာများသည် မုဒိမ်း ကျင့်ခံရသည် ဆိုသည့် သက်သေများ ဖြစ်ပါသည်။
အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ရဲဌာနသို့ ဖုန်းခေါ်ပါ။ ရှက်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိသလို ခံစားရခြင်း၊ ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့် တုန်လှုပ်ခြင်း တို့သည် ပုံမှန် ဖြစ်တတ်သော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်များ၏ အကြံဉာဏ် ရရှိရန် အရေးကြီး ပါသည်။ အရက်ဆိုင်၊ ကလပ် သို့မဟုတ် ပါတီပွဲများသို့ သွားလျှင် တစ်ဦးတည်း မသွားပါနှင့်။ သူငယ်ချင်းများ စုပေါင်းသွားခြင်းဖြင့် တစ်ဦးကို တစ်ဦး အပြန်အလှန် ကူညီ နိုင်ပါသည်။
သင့်စိတ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ခံစားရသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် ခပ်ဝေးဝေးတွင်သာ နေပါ။ သင်အပြည့် အ၀ ယုံကြည်နိုင်ခြင်း မရှိသူထံမှ မည်သည့် တိုက်ကျွေးမှုကိုမျှ လက်မခံပါနှင့် သင်သောက်နေသော ခွက်အား စိတ်ချရသော စောင့်ကြည့် ပေးမည့်သူ မရှိဘဲ အိမ်သာသွားလျှင်ပင် ချန်မထား ခဲ့ပါနှင့်။ အထက်ပါ ဆေးများအား အရက်အပြင် အချိုရည်များ၊ လက်ဘက်ရည်၊ ကော်ဖီနှင့် ချော ကလက် ဖျော်ရည်အပူ စသည်တို့တွင် ထည့်ခတ် နိုင်ပါသည်။ သင့်အား ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆေးဝါးများစွာ ရှိပြီး အများစုသည် သောက်သုံးသည့် အရည်များအတွင်း အလွယ်တကူ မသိရှိနိုင်ပါ။ ပုလင်းအတွင်းမှ အရည်ကို သောက်သုံးပြီး ပုလင်း အ၀အား သင့်လက်မဖြင့် ပိတ် ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုလင်းအား စောင့်ကြည့် ပေးမည့်သူ မရှိဘဲ ထားခဲ့ လျှင် ယင်းပုလင်းအတွင်း မည်သူက မည်သည့် အရာများ ထည့်လိုက်သည်ဟု သိရှိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။
အကယ်၍ ထိုသို့ထားခဲ့မိ၍ ပြန်လာသည့်အခါ သင်၏ ပုလင်း သို့မဟုတ် ခွက်သည်နေရာ ရွေ့နေခြင်း၊ ပုံစံပြောင်းနေခြင်း၊ ပြည့်အောင် ထပ်ဖြည့်ထားသည်ဟုထင်ရခြင်း သို့မဟုတ် အရသာ ထူးခြားနေခြင်း တို့ တွေ့ရှိရပါက ဆက်လက် သောက်သုံးခြင်း မပြုပါနှင့်။ အရက်ဆိုင်၊ ကလပ် သို့မဟုတ် ပါတီပွဲတွင် ယခုမှ တွေ့ဖူးသူနှင့် အတူ ပြန်ရမည် ဆိုပါက အထူး စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက်မျှနှင့် မူးလာသည်ဟု ခံစားလာရပါက ယုံကြည်ရသော မိတ်ဆွေ၊ ကလပ်မှ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်း သို့မဟုတ် အရက်ဆိုင် အုပ်ချုပ်သူများထံမှ အကူအညီ ရယူပါ။
လုံခြုံ စိတ်ချရသည့် နေရာသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ရောက်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်အကူ အညီ တောင်းမည့် သူသည် မည်မျှကြာအောင်ပင် သိရှိနေခဲ့သူ ဖြစ်စေကာမူ လုံးဝ ယုံကြည်ရသူ ဟုတ် မဟုတ် သေချာစွာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပါ။ ကျားမ မရွေး ဆေးခတ် ခံရနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်များမှာ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း အန္တရာယ် အား လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ သင်အပြင် သွားသည့် အခါတိုင်း အထက်ပါ အချက် အလက်များ အား မှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို အထူးဂရုပြု သင့်ပါကြောင်း။ ။
(အခုတော့ အဲဒီ Date Rape Drugs တွေ ဖျော်ရည်ထဲမှာ ခတ်ထား မထားစမ်းသပ်သိရှိနိုင်တဲ့ Detection Kit တွေ ပေါ်နေပါပြီ။ အသေးစိတ်ကို*http://www.csus.edu/alcohol/predatory_drugs.html* မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။)
အခုပြောမယ့် ဆေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှု တွေကို အထောက်အကူ ပြုဖို့ အသုံးပြု ကြပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်တယ် ဆိုရာတွင် ကာယကံရှင်၏ သဘောဆန္ဒ မပါသော လိင်မှုဆိုင်ရာ အပြုအမူတိုင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ဤနေရာတွင် မလျှော်ရာ ကိုင်တွယ်ခြင်းမှ အစ (အရွယ် ရောက်သူတိုင်း သိကြပြီး ဖြစ်မည့် အမြင်ရိုင်းသော ရှင်းလင်းချက် စာသားများကို ဖျက်ထားပါ သည်) ကြံစည်ခြင်းတို့ပါ ပါဝင်ပါသည်...........ယခုပြောမည့် ဆေးဝါးများ၏ အာနိသင်ကြောင့် ဆေးခတ် ခံရသူဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံနိုင်မှု မရှိတော့ဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှုအား ငြင်းပယ် နိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးကာ မည်သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကိုပင် မှတ်မိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။
ယင်းဆေးဝါး များသည် ယေဘုယျ အားဖြင့် အရောင်မရှိ၊ အနံ့မရှိဘဲ အရသာလည်း မရှိသဖြင့် တစ်ဖက် သား မရိပ်မိစေဘဲ အချိုရည် အတွင်းသို့ ထည့်ခတ် နိုင်ပေသည်။ Date rape drug အမျိုးအစား အနည်းဆုံး သုံးမျိုး ရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -
Date rape (ချိန်းတွေ့ ကျင့်ကြံခြင်းလို့ ဘာသာပြန်ရင် ရမယ်ထင်ပါ့)ဟု အသုံး များသော်လည်း ပညာရှင် အများစုကတော့ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း (drug-facilitated sexual assault) ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ပိုမို နှစ်သက်ကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများအား ဓါးပြမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းအရ တိုက် ခိုက်ခြင်း များ ကဲ့သို့သော အခြား ရာဇ၀တ်မှု များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျားမ မရွေး ဆေးအာနိသင် ပြနိုင်ပေသည်။
GHB သည် အရောင်အဆင်းနှင့် အနံ့မရှိသော အရည်၊ အဖြူရောင် အမှုန့်နှင့် ဆေးပြားဟူ၍ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ Rohypnolသည် ဆေးပြား ပုံစံဖြစ်ပြီး အရည်များတွင် ပျော်ဝင် နိုင်သည်။ ဆေးပုံစံ အသစ်သည် အရည်များတွင် ပျော်ဝင်သည့် အခါ အပြာရောင် သန်းသွား သော်လည်း အရောင် မရှိသည့် ဆေးပုံစံ ဟောင်း အားလည်း ရရှိနိုင် ပေသေးသည်။Ketamine မှာမူ အဖြူရောင် အမှုန့်ဖြစ်သည်။
ဆေးသည် လျှင်မြန်စွာ အာနိသင် ပြနိုင်သည်။ ဆေးအာနိသင် မပျယ်ခင်ခံသည့် အချိန်မှာမူ ကွဲပြားသည်။ ယင်းသည် ဆေးမည်မျှ အသုံးပြုသည် ဆိုသည့် အချက်နှင့် အရက် ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများနှင့် ရောစပ်ထားသည့် အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အရက်သည် ထိုဆေးများ၏ အာနိသင်ကို ပိုမို ဆိုးဝါးစေပြီး ကျန်းမာရေးကို ပိုမို ထိခိုက် စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်GHB ကို အိမ်တွင်ပင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ် နိုင်ပေ သည်။
အာရုံ စူးစိုက်နိုင်မှု လျှော့ကျခြင်း အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်ခြင်း မူးဝေခြင်း မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင် စိတ်ဖြစ်ခြင်း အမြင်ေ၀၀ါးလာခြင်း သတိလစ်ခြင်း လေဖြတ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်း ဆေးခတ်ခံ ရ ချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက်များအား မမှတ်မိခြင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း တုန်တုန် ယင်ယင်ဖြစ်ခြင်း ချွေးထွက်ခြင်း အော့အန်ခြင်း နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးကွေးခြင်း အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း သတိမေ့မြောခြင်း (ဦးနှောက်အလုပ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း - coma) သေဆုံးခြင်း
ဆေးခတ် ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက် များအား မမှတ်မိခြင်း သွေးပေါင်ချိန် ကျခြင်း အိပ်ချင်လာခြင်း ကြွက်သားများ အားလျှော့ လာခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သားများအား ထိန်းချုပ်နိုင် စွမ်း မရှိတော့ခြင်း အရက်မူး သကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်း မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ် ဖြစ်ခြင်း စကား မပြောနိုင်တော့ခြင်း လှုပ်ရှားရန် ခက်ခဲလာခြင်း အသိစိတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ခြင်း အမြင်ေ၀၀ါးလာခြင်း မူးဝေခြင်း အစာအိမ် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်အာရုံ ချောက်ခြားခြင်း အချိန်နှင့် အမှတ်အသား များအား မှတ်သားနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း အမြင်နှင့် အကြား အာရုံများ မမှန်မကန် ဖြစ်လာခြင်း မိမိကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ဟု ခံစားလာရခြင်း လှုပ်ရှား နိုင် စွမ်းအား ထိခိုက်လာခြင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲလာခြင်း အူတက်အောင်ရယ်ခြင်း အော့အန်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ် ထိတွေ့ ခံစားနိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း မှတ်ဉာဏ် ထိခိုက်ခြင်း အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း ထုံထိုင်းခြင်း လှုပ်ရှားမှုအား ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း အမူအရာ ကြမ်းတမ်းလာခြင်း များဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ချို့ ဆေးတွေက တရားဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို မထိခိုက်ဟု မဆိုလိုပါ။ တရားဝင် ဆေးဝါး ဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူများ (ဆရာဝန် ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ)၏ ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ အသုံး မပြုသင့်ပါ။
GHBအား narcolepsy ဟုခေါ်သည့် အိပ်မပျော်သည့် ရောဂါအား ကုသရန်အတွက် အမေရိကတွင် မကြာသေးမီက တရားဝင် ဆေးဝါး အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Rohypnolသည် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းတွင် နာရီပေါင်း များစွာ နေနိုင်ပြီး ဆေးသောက်သုံးပြီး ၇၂ နာရီ အတွင်းတွင် ဆီးအတွင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ GHB မှာမူ ၁၂ နာရီ အထိသာ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း နေနိုင်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ အကူအညီမရမချင်း ဆီးမသွားပစ်ပါနှင့်။ ရေလောင်းဆေးခြင်း၊ရေချိုးခြင်း သို့မဟုတ် အ၀တ်အစားလဲခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ယင်းအရာများသည် မုဒိမ်း ကျင့်ခံရသည် ဆိုသည့် သက်သေများ ဖြစ်ပါသည်။
အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ရဲဌာနသို့ ဖုန်းခေါ်ပါ။ ရှက်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိသလို ခံစားရခြင်း၊ ကြောက် လန့်ခြင်းနှင့် တုန်လှုပ်ခြင်း တို့သည် ပုံမှန် ဖြစ်တတ်သော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်များ၏ အကြံဉာဏ် ရရှိရန် အရေးကြီး ပါသည်။ အရက်ဆိုင်၊ ကလပ် သို့မဟုတ် ပါတီပွဲများသို့ သွားလျှင် တစ်ဦးတည်း မသွားပါနှင့်။ သူငယ်ချင်းများ စုပေါင်းသွားခြင်းဖြင့် တစ်ဦးကို တစ်ဦး အပြန်အလှန် ကူညီ နိုင်ပါသည်။
သင့်စိတ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ခံစားရသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် ခပ်ဝေးဝေးတွင်သာ နေပါ။ သင်အပြည့်အ၀ ယုံကြည်နိုင်ခြင်း မရှိသူထံမှ မည်သည့် တိုက်ကျွေးမှုကိုမျှ လက်မခံပါနှင့် သင်သောက်နေသော ခွက်အား စိတ်ချရသော စောင့်ကြည့် ပေးမည့်သူ မရှိဘဲ အိမ်သာသွားလျှင်ပင် ချန်မထား ခဲ့ပါနှင့်။ အထက်ပါ ဆေးများအား အရက်အပြင် အချိုရည်များ၊ လက်ဘက်ရည်၊ ကော် ဖီနှင့် ချောကလက် ဖျော်ရည်အပူ စသည်တို့တွင် ထည့်ခတ် နိုင်ပါသည်။ သင့်အား ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆေးဝါးများစွာ ရှိပြီး အများစုသည် သောက်သုံးသည့် အရည်များအတွင်း အလွယ်တကူ မသိရှိနိုင်ပါ။ ပုလင်းအတွင်းမှ အရည်ကို သောက်သုံးပြီး ပုလင်း အ၀အား သင့်လက်မဖြင့် ပိတ်ထားခြင်း သည် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုလင်းအား စောင့်ကြည့် ပေးမည့်သူ မရှိဘဲ ထားခဲ့လျှင် ယင်းပုလင်းအတွင်း မည်သူက မည်သည့် အရာများ ထည့်လိုက်သည်ဟု သိရှိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။
လုံခြုံ စိတ်ချရသည့် နေရာသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ရောက်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်အကူအညီ တောင်းမည့် သူသည် မည်မျှကြာအောင်ပင် သိရှိနေခဲ့သူ ဖြစ်စေကာမူ လုံးဝ ယုံကြည်ရသူ ဟုတ်မဟုတ် သေချာစွာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပါ။ ကျားမ မရွေး ဆေးခတ် ခံရနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်များမှာ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း အန္တရာယ်အား လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ သင်အပြင် သွားသည့် အခါတိုင်း အထက်ပါ အချက် အလက်များ အား မှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို အထူးဂရုပြု သင့် ပါကြောင်း။ ။
Posted by arakanmuslim at 10:21 AM
SHINA LEY December 10, 2018 at 11:16 PM
Unknown January 27, 2019 at 10:17 AM
Kartik March 17, 2019 at 1:49 AM
Vidya Balan March 21, 2019 at 10:41 AM
sifu12 January 7, 2020 at 1:01 AM
And, for people that are dealing with issues in their Microsoft office installation.
This informative article is always to provide you with the main points concerning the Microsoft Office 2010 Product Key Free and how make use of it. The blog post will let you go by means of the whereabouts of Microsoft office 2010 Activation key along with the techniques to get the installation done.
ryker3477 January 19, 2020 at 10:11 PM
If you may be associated withaserious union oranew fling you may be most likely heading to need to make thisaexclusive day comprehensive of romance and new memories. Shopping for that properly phrases? Below areafew passionate Valentine’s Day Wishes to share along with your lover.
The ultimate way to rejoice like this Happy Valentines Day Quotes is by havingaHappy Valentine’s Day message and greetings!
Even if you might have been with the sweetheart for your number of times or multiplealong time, there is something about February 14th which makes romancealot more important and sweet. As your romantic relationship and inner thoughts keep on to develop, you already know there's no one you would probably alternatively fork out your time and energy and affections on. Your adore is every little thing you've at any time preferred inavery associate therefore you embrace every prospect you might have to permit them know howalot you take care of them.
qasisaew March 25, 2020 at 2:37 AM
sidra saeed April 21, 2020 at 12:14 AM
Your blog is amazing with fantastic info AirRadar5MAC Crack
Mountain Duck Crack Mac
Shoaib Amin October 7, 2020 at 11:13 AM
werwer October 19, 2020 at 11:52 PM
Best Holiday Light Projector comes geared up by usingamultitude of unique styles and types from which to choose, like white snowflakes, snowmen, Christmas trees, includingalot considerably more. This causes it to be stand out among the most projectors out there that typically only have one or two customizable patterns. Moreover, this projector is waterproof and it has been analyzed in close to any weather disorders, it does not matter how extreme. With this individual projector, you get twice the brightness and clarity of daily projectors,astandard delivered by its strong LED lights
download4mac October 21, 2020 at 3:10 PM
Crack October 26, 2020 at 3:34 AM
Shuvo November 3, 2020 at 5:06 AM
shoaib January 12, 2021 at 8:15 AM
Muzamil Ansari crack January 13, 2021 at 4:30 AM
Shoaib Malik January 13, 2021 at 6:07 PM
Ansari Cracks King January 15, 2021 at 9:06 PM
chabdullah January 20, 2021 at 12:41 PM
Unknown February 3, 2021 at 9:51 AM
flotsam game free download
https://crackmix.com February 6, 2021 at 3:53 AM
zain February 7, 2021 at 10:32 PM
sheikhdilawar February 8, 2021 at 11:51 PM
Sohail babar February 13, 2021 at 3:14 AM
Unknown February 13, 2021 at 2:38 PM
freeprokeys April 6, 2021 at 4:33 AM
deep-freeze-crack may help eliminate pliers downtime and damage by merely generating pc configurations. No matter what effects occur, built this program was to suspend their own body.
Jordan Leonard April 11, 2021 at 11:03 PM
malik shoaib April 20, 2021 at 9:14 AM
Rolsan Roye May 10, 2021 at 2:24 AM
As fun as boobs are for filling out specified attire, there is an abundance of challenges that include aiming to outfitasignificant upper body. Button up shirts leave you with giant gaps, flowy tops hang off you like an unflattering tent, and perhaps the slightest V-neck shows off your porn star cleavage inside ofatruly brazen way. It’s challenging identifying clothes that can be the two fashionable and able of made up of the daring and bouncing celebration in your chest. On the bra to your raincoat, every layer presents its unique worries visit for more information Cons Of Big Boobs
Rimsha May 15, 2021 at 2:47 AM
anum May 19, 2021 at 8:35 AM
crack4u.net May 19, 2021 at 8:59 AM
javaid May 27, 2021 at 8:44 PM
Thanks for sharing such great information, I highly appreciate your hard-working skills which are quite beneficial for me. Avg Antivirus Crack
rameez May 30, 2021 at 7:56 AM
sara_khan June 3, 2021 at 9:41 AM
Rizwan June 6, 2021 at 3:20 PM
Ryan Amit June 7, 2021 at 10:36 AM
Unknown June 10, 2021 at 1:55 AM
wasi12345 June 10, 2021 at 3:32 AM
haseebzameer121@gmail.com June 11, 2021 at 7:06 AM
haseebzameer121@gmail.com June 11, 2021 at 10:07 PM
abdul qadeer June 12, 2021 at 5:05 AM
Ratan Singh June 13, 2021 at 9:23 AM
agoosh June 14, 2021 at 6:42 AM
Sulastri June 14, 2021 at 6:22 PM
Jcharlas June 16, 2021 at 4:55 AM
It's truly solid for you everything considered all window programming foundation. This site is astounding its article is focal and influencing. I appreciated and bookmark this site on my chrome. This is where you can get all break programming in like way present inasensible manner.
Jcharlas June 16, 2021 at 4:56 AM
It's genuinely strong for you everything considered all window programming establishment. This site is dumbfounding its article is central and impacting. I appreciated and bookmark this site on my chrome. This is the place where you can get all break programming in like manner present inareasonable way.
asma June 16, 2021 at 1:51 PM
mian June 18, 2021 at 4:10 AM
upmypc June 22, 2021 at 11:51 PM
Amazing blog! I really like the way you explained such information about this post with us. And blog is really helpful for us. conceiva-mezzmo-crack
werwer June 26, 2021 at 8:02 AM
Buddy Pokemon by strolling them specified distances. Niantic is additionally updating the APK so it will eventually detect rooted Android products or jailbroken gadgets. In case you are employingarooted Android gadget to make use of the Pokemon Go Hack, you may still get around this by utilizing RootCloak, which hides root from Pokemon Go application. Of study course, you can find nevertheless lots of no-root Pokemon Go Hacks like FlyGPS or Tutuapp which you'll still use fine. https://freecrackbox.com/pokemon-go-crack-2021/
freecrackkey July 3, 2021 at 9:16 PM
Unknown July 7, 2021 at 8:47 AM
software cracks July 10, 2021 at 4:10 AM
ch July 12, 2021 at 9:56 AM
super ultimaker apk
Pc Full Crack July 14, 2021 at 2:02 PM
Sajid Softs July 15, 2021 at 7:23 AM
Unknown July 31, 2021 at 11:17 PM
Talhapc.com And Crackedithare August 4, 2021 at 12:16 PM
lurkapc.com August 11, 2021 at 4:43 AM
Shahbaz Anjam August 23, 2021 at 11:13 PM
I'm confused ... any advice? Thank you! vyprvpn crack
Activatedlink August 24, 2021 at 3:53 AM
Unknown August 24, 2021 at 9:25 AM
Nasir Sardar August 25, 2021 at 3:20 AM
I love this website and blog. I am really impressed to your blog.
Nasir Sardar August 25, 2021 at 11:42 PM
Nasir Sardar August 26, 2021 at 2:18 AM
final fantasy shadowbringers crack
Kashif ch August 27, 2021 at 12:05 AM
This isagreat method, especially for those new to the blogosphere. Thanks for sharing this information. Articles to read! guitar pro crack
Kashif ch August 27, 2021 at 12:11 AM
euro truck simulator2crack F
maham August 28, 2021 at 8:26 AM
sajju August 30, 2021 at 1:16 AM
They say that the Devil works hard. Everyone’s wrong. You work harder. We’re so proud of you
Muhammad Junaid September 1, 2021 at 5:42 AM
vista codec package crack
WildCrack September 9, 2021 at 4:49 AM
Origin Pro Crack isaprogram all connected with graph reading and data analysis. This program can be called up as an aid to scientists and engineers because it makes their work more manageable.
Zaki Saanvi September 14, 2021 at 2:41 AM
Ubaid Bhai September 21, 2021 at 11:55 PM
Unknown September 25, 2021 at 9:10 PM
visit it this my site downloadfreegameshere.com PC download games Thousands of free Download or play free online! .pcsoftwarehere.com Here is the Exact Arcade Version of Highlights: In Service Since 1997, Offering An Inspiring And Dynamic Work Environment, Information Accessible From Multiple Sources
naraka: bladepoint torrent
Crackkick.com September 29, 2021 at 1:04 PM
https://crackmix.com November 3, 2021 at 1:17 AM
zunairahashmi November 12, 2021 at 12:32 AM
Thanks For Post which have lot of knowledge and informataion thanks.... Mirillis Action 4.23.0 Crack
zia sir December 27, 2021 at 6:15 AM
rao arif December 28, 2021 at 6:22 AM
abdul sattar December 29, 2021 at 2:52 AM
Marilyn Dickinson January 10, 2022 at 5:21 AM
John Abrahium January 13, 2022 at 5:25 AM
GraphPad Prism Crack Activation Code
driver finder January 14, 2022 at 11:35 PM
Naeem January 15, 2022 at 2:35 AM
Ghulam yasin January 22, 2022 at 6:23 AM
I guess I am the only one who came here to share my very own experience. Guess what!? I am using my laptop for almost the past2years, but I had no idea of solving some basic issues. But thankfully, I recently visitedawebsite named vstworld.net that has explained an easy way to install all VST Crack Softwares free Download for Windows sand Mac.
Euro Truck Simulator2Pro Crack
Kingnight January 26, 2022 at 12:14 AM
babarrao January 29, 2022 at 4:48 AM
Hafeez Shah January 31, 2022 at 12:12 AM
Unknown January 31, 2022 at 5:53 AM
MURSALEEN February 1, 2022 at 10:12 PM
carrom pool download crack
Naeem February 3, 2022 at 12:17 AM
John King February 3, 2022 at 5:44 AM
khizar February 4, 2022 at 11:26 PM
Iskysoft Imedia Converter-deluxe Crack
Shoaib Boss February 6, 2022 at 11:37 AM
Amir Iqbal February 7, 2022 at 7:49 AM
Aamir Saeed February 7, 2022 at 10:45 AM
Muhammad Sabir February 8, 2022 at 1:15 AM
Unknown February 8, 2022 at 8:54 PM
Shahrukh Khan February 10, 2022 at 11:10 PM
Ismail February 11, 2022 at 2:29 AM
Mary Taft February 19, 2022 at 3:36 AM
crackerr February 19, 2022 at 4:02 AM
Nice information. I’ve bookmarked your site, and I’m adding your RSS feeds to my Google account to get updates instantly. Alien Skin Exposure Crack
Unknown February 22, 2022 at 3:30 AM
Boss February 22, 2022 at 8:21 PM
zia sir February 27, 2022 at 7:43 AM
ch February 28, 2022 at 3:08 AM
Punjabians February 28, 2022 at 11:05 PM
Amir Iqbal March 1, 2022 at 10:13 PM
Naeem Shah March 8, 2022 at 4:02 AM
outlook4gmail with crack
Aamir Saeed March 9, 2022 at 6:25 AM
procrackerpc March 14, 2022 at 5:53 AM
Unknown March 16, 2022 at 7:37 AM
Nikfury March 25, 2022 at 3:17 AM
I will avoid readingablog article in the future that makes me so frustrated that I do not even bother to open it.
It's my choice to read, but I hope you have something to say.
One of the things I hear from you when you are not thirsty to listen is to call for help on something that can be easily said.
crackkeygenpatch54 April 12, 2022 at 10:00 PM
4u April 13, 2022 at 7:40 AM
Unknown April 19, 2022 at 6:31 AM
Jonathan April 19, 2022 at 10:58 AM
Crack Software April 21, 2022 at 6:25 PM
Duniya o Doulat || Ek naujawan ka waqia || kabhi ALLAH ke yaad se gafil na hona By Ajmal Raza Qadri
Skidrowkeyz April 25, 2022 at 2:30 AM
shanijani May 9, 2022 at 3:00 PM
Michael May 14, 2022 at 8:38 PM
Morningstar42 May 19, 2022 at 1:24 PM
4u May 20, 2022 at 8:32 AM
Rehan May 22, 2022 at 2:15 AM
Hasnain Malik Ghallu May 25, 2022 at 2:13 AM
Backy1515Lynch June 2, 2022 at 1:01 AM
https://topsoftwarefiles.com June 16, 2022 at 1:07 AM
apkfiles June 20, 2022 at 10:36 AM
david shawn June 25, 2022 at 9:26 PM